ऐतिहासिक धरोहर रानीपोखरीले आफ्नु स्वरुप फिर्ताको अन्तिम घडि छिचोल्दै
मंगलबार, कार्तिक ४, २०७७ ०४:५४:५१ युनिकोड
बुधवार, भदौ १७, २०७७ Ishwor Luitel
रानीपोखरी काठमाडौं नगरको मध्यमा अवस्थित एक मानवनिर्मित पोखरी हो । यो सुन्दर पोखरीको पूर्वमा राणा प्रधानमन्त्री श्री ३ वीरशमशेरले बनाएको घन्टाघर, श्री ३ चन्द्र शमशेरले बनाएको त्रिचन्द्र कलेज छन् भने पश्चिममा नेपालकै सबैभन्दा पुरानो विद्यालय दरबार हाईस्कुल छ । त्यस्तै उत्तरमा विश्वज्योति सिनेमाघर छ भने दक्षिणमा रत्नपार्क रहेको छ ।
प्रताप मल्लले आफना माइला छोरा चक्रवर्तेन्द्रको मृत्यु भएपछि शोकमा डुबेकी रानीलाई खुसी पार्न वि.स. १७२५ सालमा रानीपोखरीको निर्माण गराएका थिए । पोखरीको बीचमा शिखर शैलीको मन्दिरसमेत निर्माण गराएका थिए । वि.स.२०७२ सालको भूकम्पले भत्काउनुअघि रानीपोखरी गुम्बज शैलीको थियो ।
त्यसअघि पटकपटक पुनर्निर्माण गर्दा रानीपोखरीको स्वरूप नै परिवर्तन भएको छ । वि.स. १९९० सालको भूकम्पमा रानीपोखरीको मन्दिरको गजुर भत्केपछि जुद्धशमशेरले त्यसको जीर्णोद्धार गरेका थिए। जुद्धशमशेरले त्यसवेला रानीपोखरीमा तारबार गर्नुका साथै भत्किएको मन्दिरलाई शिखर शैलीमै बनाएका थिए।
संस्कृतिविद् राणाकालमा रानीपोखरीको मौलिकता मासिएको बताउँछन्। संस्कृतिविद् अनुसार ‘जुद्धशमशेरले तारबार गर्ने क्रममा मौलिकता मासे, त्यसअघि पनि पटकपटकको पुनर्निर्माणमा रानीपोखरीको रोहन भयो’ ्। जंगबहादुरले रानीपोखरीलाई मुगल शैलीमा बनाउन लगाएका थिए। पछि जंगबहादुरले अंग्रेजहरूको प्रभाव परेर नेपाली संस्कृतिमा मुगल संस्कृति भित्र्याएका थिए।
रानीपोखरी नेपाल भाषा (नेवारी) न्हु पुखु पोखरी भनेर चिनिन्छ। नेपाल भाषामा न्हु भनेको नयाँ हो अर्थात् नयाँ पोखरी। पोखरीको दक्षिण किनारमा हात्तीको मूर्तिमाथि आफू र आफ्ना दुई छोरा मोहिपतेन र चक्रवर्तेन्द्रको सालिक पनि राजा प्रताप मल्लले निर्माण गराएका थिए। रानीपोखरी ६२ रोपनी १३ आना क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। पोखरी १८० मिटर लामो र १४० मिटर चौडा छ।
२०७२ साल वैशाख १२ गते गएको भूकम्पले फेरी रानीपोखरी लाई क्षेदवि क्षद गर्यो । र पुनर्निर्माण गर्न भूकम्प गएको एक वर्षपछि २०७३ वैशाख १२ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट रानीपोखरी पुनर्निर्माणको शिलान्यास भयो ।
र मल्लकालीन ग्रन्थकुट शैलीमै बनाउने भनिएको रानीपोखरीस्थित बालगोपालेश्वर मन्दिरको डिजाइन तयार गरियो ।
यही डिजाइनअनुसार मन्दिर निर्माण सुरू गर्न राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले निर्माण कम्पनीसँग सम्झौता गर्याे ।
प्राधिकरणका अनुसार बालगोपालेश्वर मन्दिर, मन्दिरमा जाने पुल र पोखरी वरिपरि बगैंचा पुनर्निर्माण गर्न सिएर तुलसी कन्ट्रक्सन जेभीबीच सम्झौता भएको थियो।
सम्झौतापत्रमा प्राधिकरण तर्फबाट सहसचिव एवं सम्पदा संरक्षण, सार्वजनिक भवन तथा पूर्वाधार महाशाखा प्रमुख शिवहरि शर्मा र निर्माण कम्पनीका तर्फबाट शान्तकुमार श्रेष्ठले हस्ताक्षर गरे ्।
रानीपोखरी पुनर्निर्माणका लागि सम्झौता रकम १४ करोड २७ हजार ५ सय ५७ रुपैयाँ विनियोजित भयो। र काम सुरु भयो ।
ऐतिहासिक रानीपोखरीको पुनर्निर्माणको काम यतिखेर लगभग सकिएको छ। २०७२ सालको भूकम्पले क्षतिग्रस्त भएको रानीपोखरीको निर्माण झण्डै ५ वर्षमा सम्पन्न हुन लागेको हो।
विभिन्न समयमा पुनर्निर्माणको विषयलाई लिएर रानीपोखरी निर्माण विवादास्पद रह्यो। रानीपोखरी पुनर्निर्माणको क्रममा पुरानो शैलीलाई अवलम्वन नगरेको भन्दै काठमाडौँ नगरपालिकालाई निर्माण जिम्मेवारीबाट हटाइयो। त्यसपछि उपभोक्ता समितिमार्फत परम्परागत शैली र प्रविधिको प्रयोग गरी मल्लकालीन शैलीमा उक्त पोखरी पुन निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता राष्ट्रिय पुन निर्माण प्राधिकरणले गरेको थियो।
प्रतिवद्धता स्वरुप डेढ वर्षमा पोखरी पुन निर्माण लगभग अन्ेितम चरणमा छ। कोरोना संक्रमणको जोखिमले सरकारले लकडाउन गरिरहेको अवस्थामा पनि रानी पोखरीको काम निरन्तर भइराखेको थियो । फलत आज पुण हाम्रो ऐतिहासिक धरोहर रानीपोखरीले आफ्नु स्वरुप फिर्ताको अन्तिम घडि छिचोल्दै छ ।
प्रकाशित मिति: बुधवार, भदौ १७, २०७७, ११:५३:३०